महिनावारी भएकाले छुँदा कसैलाई दाग लाग्यो ? एलर्जी भयो कि के भयो?’ – रियाशा दाहाल (भिडियो हेर्नुहोस – Dailny NpNews
महिनावारी भएकाले छुँदा कसैलाई दाग लाग्यो ? एलर्जी भयो कि के भयो?’ – रियाशा दाहाल (भिडियो हेर्नुहोस
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख १७, २०७८ समय: ८:३५:४६
भिडियो अन्तिममा छ कृपया पूरा हेरिदिनुहोला
महिनावारी विषय हामीले छ कक्षामा पढ्नु पर्थ्यो र यो विषय पढ्न मलाई निकै रूचि लाग्थ्यो। म कक्षामा ध्यान दिएर सुन्थेँ र नजानेको कुरा शिक्षकलाई सोध्थेँ। तर कोही साथीहरू लाजले टाउको तल पार्थे। मलाई भने मतलब लाग्दैन थियो।
अहिले आफ्नो घरमा महिनावारी बार्ने चलनले गर्दा कहिलेकाहीँ साथीहरूको घर जाँदा पनि भान्सामा छिर्न सक्दिनँ। यसमा म आमाबुबालाई पूरै दोष दिन्नँ। उहाँहरू जुन तरिकाले हुर्किनुभयो, मलाई त्यही सिकाउनुभएको हो। मेरो पुस्तासम्म फैलिसकेको यी कुचलन भविष्यमा भने अघि बढ्न दिन्नँ भनेर मैले अठोट लिएकी छु। आमाहरूले मलाई सिकाउनुभएका कुरा म मेरा छोराछोरीलाई सामना गराउँदिनँ।
महिनावारी बार्नु पछाडि वैज्ञानिक कारण थिए होला, तर समयसँगै यसलाई कुन तरिकाले लिने कुरामा फरक पर्छ। यस्तो बेला महिलाको शरीर अरू बेलाभन्दा कमजोर हुन्छ। सक्दो आराम चाहिन्छ। तर महिनावारी भएकालाई छुनै नहुने, सामान दिँदा पनि भुइँमा राखेर दिनु गलत हो।
मलाई महिनावारी हुनुभन्दा अगाडि अत्ति नै रिस उठ्छ, रुन मन लाग्छ र चिढिन्छु। अधिकांश महिलालाई महिनावारी हुनु एक हप्ता अगाडिदेखि नै ‘पिएमएस’ हुन थाल्छ। (पेट, कम्मर दुख्नेदेखि मुड खराब हुने लगायत समस्यालाई ‘पिएमएस’ अर्थात् ‘प्रि–मेन्सट्रुअल सिन्ड्रम’ भनिन्छ। पिएमएसबारे स्टोरी पढ्नुस्ः कस्तो बेला छिनमै रिसाउँछन्, छिनमै खुसी हुन्छन् महिला?)
त्यस्तो बेला परिवारले गर्ने व्यवहारले हाम्रो मानसिकतामा पनि धेरै असर पारिरहेको हुन्छ। यो विषयमा भने मेरो दाइ निकै बुझ्झकी हुनुभयो। दाइले महिनावारी बेला छोइछाइ गर्ने विषय कहिल्यै समर्थन गर्नुभएन। उहाँ आफैं मेरा लागि प्याड किन्न जानुहुन्थ्यो र मलाई गाह्रो भएको बेला खाना वा औषधि ल्याइदिनुहुन्थ्यो।
मलाई महिनावारी हुनुभन्दा अगाडि बेस्सरी पेट दुख्छ। शरीरबाट रगत आएपछि भने ज्यान थकित भएको महसुस हुन्छ। तर महिनावारीकै कारण मैले अहिलेसम्म आफ्नो सुटिङ रोकेकी छैन। औषधि खाएर भए पनि म काममा जान्छु।
एकपटक ‘मेरी बास्सै’को सुटिङ बेला मलाई महिनावारी भएर बेस्सरी पेट दुखेको थियो। म कोहीसँग बोल्न सकिरहेकी थिइनँ। अनि कोही बोल्न आएपनि रिस उठेको थियो। पिएमएसका कारण अरूको चित्त दुखाउँला भनेर अगाडि नै सबैलाई सचेत गराउँछु।